YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, September 04
You can buy the tickets for THE LADY next week in Toronto
The Lady will be at 2011 Toronto International Film Festival.
The Toronto International Film Festival (TIFF) is recognized as the most important film festival after Cannes. Gala Presentations are Red Carpet Premiere events at Roy Thomson Hall. Featuring an address by the director and cast members before the film. The Lady will be one of this year TIFF's Gala Presentations.
Please see below for some excerpts about The Lady.
Director Luc Besson takes on the inspiring true story of Burmese democracy leader, political prisoner and Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi (Michelle Yeoh) and the tenacious long-distance bond she maintained with her British husband, Michael Aris (David Thewlis) while under house arrest for overadecade.
From the Programmer's Note
From one of the world’s most ambitious craftsmen of large-scale cinematic entertain­ment comes this sweeping account ofatrue hero of our time. ….
Filmed largely in Thailand and Burma, whose beautiful cities, fecund jungles and diverse cultures fill the screen with dynamic colour and rich detail, The Lady tells the story of Suu Kyi’s simultaneous triumph and tragedy. Michelle Yeoh eloquently embod­ies Suu Kyi’s tranquil defiance and wisdom — yet her political struggle is only half of the story. Played with great tenderness by David Thewlis, Michael Aris was Suu Kyi’s British husband and tireless advocate, and he is the film’s second protagonist. ………..
At once epic and intimate, disturbing and galvanizing, The Lady celebrates the strug­gle ofapeople and the difference thatasingle strong-willed individual can make in the world.
Monday September 12, 9:30pm
Gala Presentation (premium screening)
Tuesday September 13, 11:00am
Saturday September 17, 6:00pm
You can buy the tickets from the below links.
BY YeYint Nge ... 9/04/20110comment
KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်အားဗိုလ်မှူးအလဖိုင်ဇော်ဘောက်မှသေနတ်ဖြင့်ပစ်
KIA အဖွဲ့အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေမှုများနှင့်ပက်သက်၍ သိရှိထားသောအကြောင်းအရာများအား သတင်းဌာနများ အနေဖြင့်သိရှိစေလိုသောကြောင့် ပေးပို့ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကိုပေးပို့လာတဲ့ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူ တစ်ဦးရဲ့အမည်ကို မဖော်ပြပေးလိုက်တာကိုတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် KIA ကချင်အဖွဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာဟိုတယ်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တွင် KIA ကချင်စစ်ဦးစီးချုပ် ဂမ်ရှောင်၊ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်တို့ ဦးစီး၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ၊ ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိ အရာရှိများ၊ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်အား KIA အဖွဲ့၏ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ လဖိုင်ဇော်ဘောက်မှသေနတ်ဖြင့်ပစ်ကာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူအားလုံးအား တယ်လီဖုန်း (လုံးဝ)မသုံးရ၊ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသွားလာခြင်းမပြုရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် နေထိုင်ရန်ညွှန်ကြားကာ လက်နက်များ သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ အက်စ်ဂွမ်မော်အနေနဲ့ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေမှာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောဆိုပြီး ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာ အောင်မြင်ရန် ကချင်လူမျိုးများကို ပိုမိုစည်းရုံးရန်ဆွေးနွေးပြောဆိုရာမှ KIA ပြည်သူ့စစ်တပ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ လဖိုင်ဇော်ဘောက်မှ ၎င်း၏စစ်ရေး အတွေ့အကြုံများအရ တုံ့ပြန်ပြောဆိုရာမှ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် အခြေအတင်စကားများခဲ့ပါတယ်။
KIA ကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဖိဖိစီးစီးတာဝန်ယူထားတဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဂမ်ရှောင်ကတော့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲများမှာအနိုင်ရရှိရန် စစ်ရေးအတွေ့အကြုံရင့်သည့် ယခင်စစ်သားဟောင်းကြီးများကို နေရာပေးဆက်ဆံလာမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကို ယခင်စစ်သားဟောင်းများက စည်းရုံးရေးသမားအဖြစ်သာ သဘောထားလျက်ရှိပါတယ်။ ယခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ အက်စ်ဂွမ်မော်ကို ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးက ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုအား KIA ကော်မတီဝင်များမှ လက်ခံခြင်း မရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တရားမ၀င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဂမ်ရှောင်အနေဖြင့် ယခုလိုငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့ အက်စ်ဂွမ်မော်မှာ ခလုတ်ကန်သင်းတစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်အောက်မှ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးအား လုပ်ကြံခိုင်း ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် KIA ကချင်အဖွဲ့အတွင်းရှိ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများမှာလည်း အချင်းချင်းမသင့်မြတ်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပါပဲ။ နောက်ဆုံးရရှိသောသတင်းများအရ KIA ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်အား KIA စစ်ရုံးချုပ်ရှိ အရေးပေါ်ကုသရန် ဖွင့်လှစ်ထားသောဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနေရပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 9/04/20115comment
by Hlaing Bwa on Saturday, September 3, 2011 at 7:45pm
ရှိလာခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ လူတွေဟာ မြို့ ပြတွေကို
တည်ထောင်လာနိုင်ခဲ့ချိန်မှာ လူမူရေးပြဿနာတွေကိုထိမ်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးတဲ့
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတွေကို အစပြုကျင့်သုံးလာရပါတော့တယ်။ မြို့ ပြတွေမှာ
တိုးပွါးလာသော လူဦးရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်
တရားဥပဒေအကျုံးဝင်သော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့ က အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကိုင်စွဲ
'အုပ်ချုပ်သည်' (Govern) ဟူသော စကားလုံးသည် အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုံး
governen နဲ့ ရှေးဟောင်း ပြင်သစ်စကားလုံး governor တို့ ကဆင်းသက်လာခဲ့ပြီး
လက်တင်ဘာသာအရ gubernare ဆိုတာ လမ်းညွှန်သည် ထိမ်းကျောင်းသည် လို့ 
အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဂရိဘာသာမှာတော့ kubernan လို့ ရေးသားပြီး "လမ်းညွှန်ထိမ်း
ကျောင်းသည်" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါ့ယ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ သည့်နောက် kubernetes လို့ ခေါ်တဲ့
'ထိမ်းကျောင်းသူ' ဆိုတဲ့ ဂရ်ိဝေါဟာရကို အစိုးရလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မူရင်း
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ "ထိမ်းကျောင်းသူ" (Steersman) သို့ မဟုတ် "ပဲ့ကိုင်သူ"
(Helmsman) ပါပဲ။ ဂရိအယူအဆမှာ သင်္ဘောနှင့်တိုင်းပြည်ကို တင်စားထားခြင်းပါပဲ။
သည်လို သင်္ဘောတစီးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ထပ်တူတင်စားမူမျိုးကို ပလေးတိုးနဲ့အရစ္စတိုတယ်လ်
တို့ ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၄၀၀) ကအရေးအသားတွေမှာ the ship of state ဆိုပြီး
သုံးနှုံးခဲ့တာကို တွေ့ ရှိရပါတယ်။
သတင်းခေတ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မူ
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ကားလ်ဒုတ်ခ်ျ (Karl Deutch) ကတော့သူ့ ရဲ့
Cybernetics ခေါ် 'ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံပညာ' အရ အစိုးရတရပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ထိမ်းကျောင်း
ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ "ယနေ့ ခေတ်
အစိုးရတရပ်ရဲ့ ထိမ်းကျောင်းပဲ့ကိုင်ခြင်းဟာ - ပြင်ပကမ္ဘာကြီးက ၀င်ရောက်လာတဲ့
သတင်းအချက်အလက်များအား သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပြီးနောက် လိုအပ်သလို
ပြောင်းလဲအသုံးချမူဖြစ်တယ်" (လက်ခံရရှိသော သတင်းဟုဆိုရာ၌ နိုင်ငံခြား
တိုင်းပြည်များရှိသံရုံးများ ရေခြားမြေခြားရောက်စစ်တပ်များ အစိုရမဟုတ်သော
အဖွဲ့ အစည်းများ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ သွားရောက်အခြေစိုက် လုပ်ကိုင်နေသော
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုမ္မဏီများ စသည်တို့ ထံမှ သတင်းများ အချက်အလက်
များ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကားလ်၏အယူအဆသည် အစိုးရတရပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်အား ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏
ရှူ့ ဒေါင့်ထခုမှ သုံးသပ်သော မြင်ကွင်းတခုသာဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်စရာရှိသော်
လည်း သူ၏တင်ပြချက်နှင့် စစ်လျှဉ်း၍ စောဒကတက်စရာမရှိအောင် မှန်ကန်နေ
သောအချက်များလည်းရှိပါသည်။ အကြောင်းကတော့ သတင်း (ကောင်းသတင်း
ဖြစ်စေ ဆိုးသတင်းဖြစ်စေ) နဲ့ ကောလဟာလ (မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ)
များသည် လူတို့ ၏စိတ်ခံစားချက်မှ တိုက်ရိုက်စေစားနိုင်ပြီး အဆိုပါစေစားမူမှ
တဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ ပြန်မူများရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်
ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း (မတ်လ ၁၉၊ ၁၉၄၅) က ပစ္စိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ
အတွင်း၌ လူတထောင်ကျော်သေကြေပျက်စီးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်လေယာဉ်တင်
သင်္ဘော 'ယူအက်စ်အက်စ် ဖရန်ကလင်' ရဲ့အကြောင်းကို စစ်နိုင်လိုတဲ့အမေရိကန်
အာဏာပိုင်တွေက လအတန်ကြာသည်အထိ ပြည်သူကိုအသိမပေးခဲ့ပဲ မစ်ဒ်ဝေး
တိုက်ပွဲမှာ ဂျပန်ရေတပ်ကို သူတို့ အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှ သည်သတင်းကို
မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်သည်လည်း သူတို့ အာဏာတည်
မြဲရေးအတွက် ပြည်တွင်းကနေပြည်ပကိုထွက်မည့် သတင်းများကိုထိမ်းချုပ်နေ
သလို ပြည်ပကနေ၀င်လာမည့်သတင်းများကိုလည်း ကြောက်လန့် တကြား
အထူးသတိထားထိမ်ချုပ်နေသည်ကိုတွေ့ ကြရမှာဖြစ်သည်။ ပြည်သူတွေ
မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်မဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းတခုဟာ မတရားသဖြင့် အဓမ္မရယူ
ထားတဲ့သူတို့ ရဲ့ ရာထူးစည်းစိမ် တွေနဲ့ အာဏာကို အချိန်မရွှေးထိပါးနိုင်တဲ့
အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ သည့်အတွက် ကွန်ပြူတာသတင်းကွန်ယက် (Internet)
တွေကို ကြောက်လန့်သွေးပျက်ပြီး အဓမ္မထိမ်းချုပ်ထားခြင်းဟာ သတင်းနဲ့ 
နိုင်ငံရေးရဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေမူပါပဲ။ ယနေ့ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်
ကို အခြားတိုးတက်တဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေလို အပြည့်အ၀သုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်
မယ်ဆိုရင် သူတို့ လည်ပင်းကို သူတို့ ကြိုးကွင်းစွပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
'အစိုးရ' နှင့် 'နိုင်ငံတော်'
မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် 'အစိုးရ' (Government) နှင့် 'နိုင်ငံတော်'
(Nation-State) ဟူသော ဝေါဟာရနှစ်ခုအား ပြက်ပြက်ထင်ထင် နားမလည်
ကြပဲ 'နိုင်ငံတော်' ဟူသော ဝေါဟာရတလုံးကြောင့် တိုင်းပြည် စုံးစုံးမြုတ်ရမည့်
အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့သည်မှာ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲလေပြီ။ မ.ဆ.လ
ခေတ်ကတည်းက နေ၀င်း စန်းယု တို့ ပါးစပ်မှ အကွပ်အညှပ်မရှိ ပရမ်းပတာ
ထွက်ကျလာသောအမိန့် များကို 'နိုင်ငံတော်မှချမှတ်သော မူဝါဒများ' ဟုဆိုကာ
လေးတန်းအထိမသင်ဖူးခဲ့သော ရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကဌများ၊ (၇) တန်းမအောင်
သော စောမောင်နှင့် ခြောက်တန်းမအောင်သော စိန်လွင်ကဲ့သို့ စစ်အရာရှိများ
တလကိုသကြားတဆယ်သားရ၍ မ၀င်မဖြစ်ဝင်ခဲ့ရသော အလုပ်သမားအစည်း
အရုံးအဖွဲ့ ဝင် ဆိုက္ကားသမားနှင့် ကွမ်းယာသည်များ၊ ဓါတ်မြေသြဇာကို အစိုးရ
ထုတ်ဈေးနှင့်ရရှိရန် မ၀င်မဖြစ်ဝင်ခဲ့ရသော တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံး
၀င် လယ်သမားများ၊ အလွန်တရားရိုးစင်းလှသည် လူငယ်ဘ၀ကိုမျက်မှန်စိမ်း
တပ်ပေးထားခြင်းခံရသော လမ်းစဉ်လူငယ်ဆိုသူများ - အားလုံး (အားလုံး) တို့ 
၏ နှုတ်ဖျား၌ 'နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သောမူဝါဒများ' 'နိုင်ငံတော်ကချမှတ်သော
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ' စသည်ဖြင့် အမိန့် အာဏာဖြင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်အားလုံး
သည် 'နိုင်ငံတော်' ဟူသော ဝေါဟာရတလုံးဖြင့် လုံးတုပ် ထားခံရသည်မှာ ယနေ့ 
နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးရသည်။ နိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်အားပေးရသည်။
နိုင်ငံတော်သို့ စပါးပေးသွင်းရသည်။ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ အလုံးလား
အပြားလား သက်ရှိလား သက်မဲ့လား မသိ။ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ငါ့အထက်ကလား
ငါ့အောက်ကလား မေးခွန်းထုတ်ရန် အခွင့်မသာခဲ့ကြ။ 'နိုင်ငံတော်' ကိစ္စသည်
သမ၀ါယမဆိုင်က နို့ ဆီ သကြား ငစိန်ဆန် မီးထွန်းရန် ရေနံဆီတို့ လောက်
အရေးမကြီးသော်လည်း ဆင်းရဲတွင်း၌အသက်ဆက်ဖို့အတွက် မ.ဆ.လ
ခေတ် (၂၆) နှစ်တွင် နိုင်ငံတော် ဆိုသောအသုံးအနှုံးသည် အမိန့် အာဏာကဲ့သို့ 
တည်သော ဝေါဟာရဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါနိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားတာ" ဟုတစုံတဦး
ကပြောလိုက်ပါက အပြောခံရသူမှာ စောဒက တစုံတရာမတက်ရဲလောက်အောင်
ပင် အမိန့် အာဏာဆန်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်ဆိုတာ
ဘာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ရကောင်း စူးစမ်းရကောင်းမှန်းသိလာကြသည်။
'အစိုးရ' နှင့် 'နိုင်ငံတော်' သည်သဘောသဘာဝအားဖြင့် အလွန်တရာကွာခြား
လှပါသည်။ အစိုးရ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ကြောင့်ဖြစ်လာရပြီး နိုင်ငံတော်သည်
အစိုးရအတွက် ဖြစ်တည်နေရခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစိုးရသည်သာ နိုင်ငံတော်ကို
အလုပ်အကြွေးပြုရန် ဖွဲ့ စည်းပ်ါပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်၊ (ဤသို့ - အစိုးရ
ကြောင့် နိုင်ငံတော်ဖြစ်နေရတဲ့ သဏ္ဍန်ဟုတ်ယောင်မူ အဓမ္မစံနစ်ဆိုးများ
ကြောင့် မြန်မာပြည်ရေတိမ်နစ်ရတော့မည့် အခြေကိုဆိုက်ခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်)။
မည်သည့်အစိုးရတက်တက် တိုင်းပြည်မပျက်သ၍ နိုင်ငံတော်သည် ပကတိအတိုင်းတည်
ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။ ထို့ အတွက် နိုင်ငံတော်က မည်သည့်အမိန့် အာဏာကိုမျှ
ပြည်သူကိုချမှတ်ခိုင်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲ - နိုင်ငံတော်ကသာ ယင်း၏ တည်တံ့
ခိုင်မြဲရေးအတွက် အစိုရတွေကိုမွေးဖွားစေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ယနေ့ နိုင်ငံတကာရဲ့
ဥပဒေအရ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အစိုးရပြောင်းလဲမူဟာ သည်တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာ
ပိုင်ဆိုင်မူ တနည်းအားဖြင့် မူလ 'နိုင်ငံတော်' တည်ရှိမူကို ပြောင်းလဲမူမရှိ လို့ 
'အစိုးရ' ဆိုတာ စုစည်းထားတဲ့ အစုအဖွဲ့ တခုမျှသာဖြစ်ပြီး သည်အဖွဲ့ အစည်းဟာ
နိုင်ငံရေးအာဏာ တရားစီရင်ရေးအာဏာနဲ့ဥပဒေပြုမူအာဏာတွေကို အချိန်
ကန့် သတ်ချက်အရ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ အညီ အကန့် အသတ်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ပေးထားခြင်းခ့ရတဲ့ အစုအဖွဲ့ သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်အရ
'အစိုးရ' ဆိုတာ 'နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ' (Political) လို့ သတ်မှတ်ပြီး အတက်အကျ
သည်တော့ 'ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်' ဆိုတာ တိကျတဲ့အချုပ်အချာအာဏာ
နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့ ယန္တရား ဖြစ်ပြီး 'ပြည်ထောင်စုမြန်မာ
နိုင်ငံတော်အစိုးရ' ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်မှာတင် သက်ဆိုင်
နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကို အလုပ်အကြွေးပြုနေတဲ့ အစုအဖွဲ့ ကိုဆိုလိုပါတယ်။
သည်အစုအဖွဲ့ ဟာ ဘယ်လိုအစုအဖွဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်ကို အပိုင်စားရထား
ခြင်းမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော်၏အရေးသည် 'အမျိုးသားရေး' ဟူသော လေးနက်မူ
အသွင်ကိုအပြည့်အ၀ဆောင်ယူသည်။ အခါများစွာတွင် အမျိုးသားရေးသည်
အစိုးရဟူသော အစုအဖွဲ့ ၏လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ထက် ကျော်လွန်သွားသော
'နိုင်ငံတော်၏အရေး' ဖြစ်သည်။ ဤသို့ သောအမျိုးသားရေး ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာချိန်
တွင် ပြည်သူတရပ်လုံးသည် 'နိုင်ငံတော်အဓွန့် ရှည်တည်တန့် ရေးအတွက်' မလွှဲ
မရှောင်သာ ပါဝင်လာရပေတော့သည်။ ( ဥပမာ နိုင်ငံခြားရန်ကို ခုခံကာကွယ်မူ
နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း သဘာဝဘေးဒုက္ခကပ်ဆိုးကြီးများကျရောက်မူ၊ တိုင်းပြည်တွင်
အငတ်ဘေးရင်ဆိုင်ရမူ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်ကဲ့သို့ သော နိုင်ငံတော် ပျက်စီးမည့်
အရေးကိစ္စကြီးများ)။ ထိုအခါ နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံသားအားလုံးသည် မူလ
'အထွဋ်အထိပ်' ဖြစ်သော 'နိုင်ငံတော်' ကိုစောင့်လျှောက်ကာကွယ်ရန်အတွက်
တိုတုပ်တိကျစွာဖွင့်ဆိုရလျှင် 'နိုင်ငံတော်' တည်ရှိမူကို တနည်းနည်းနဲ့ ချိနဲလာစေမူ
မှန်သမျှကို ကာကွယ်ချိန်တွင် - အမျိုးသားရေး အသွင်သဏ္ဍန်ဟာ ထင်ထင်ရှားရှား
ကနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦးရေ သန်း (၅၅ - ၆၀) မှာ ခုခံအားကျရောဂါ ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာနာ
(AIDS / HIV) ဖြစ်နေသူ ငါးသိန်းကျော်ရှိနေပြီး သည်ကိန်းဂဏန်းဟာ မြန်မာလူမျိုး
(၁၀၀) မှာ တယောက်နီးပါးဟာ သည်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်နေတဲ့
သဘောပါပဲ (မှတ်ချက် - လူဦးရေ သန်း သုံးဆယ်ရှိတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ အဆိုပါရော
ဂါရှင် တသောင်းပဲရှိတဲ့အတွက် ကနေဒီယံ သုံးထောင်မှာ တယောက်သာသည်ရောဂါရှိ
သူဖြစ်ပါတယ်)။ ကနေ့ မြန်မာလူမျိုးအများစုကြီးဟာ အဟာရဓါတ်ချို့ တဲ့မူ အထူးသဖြင့်
မွေးစ ကလေး (၄) ဦးမှာ (၂) ဦးဟာ ပေါင်ချိန်မပြည့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျန်ပေါင်ချိန်ပြည့်သော
ကလေး (၂) ယောက်ထဲက (၁) ယောက်ကလည်း ထမင်းရည်သောက်ပြီးကြီးနေရတဲ့
အခြေအနေပါပဲ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ် အရွယ်ရောက်သူ အရွယ်ကောင်းတွေ
ကျန်းမာရေးကောင်းသူတွေ ပညာတတ်တွေ ပြည်ပကိုအလုံးအရင်းနဲ့ ထွက်နေချိန်မှာ
တိုင်းပြည်ကို လာဘ်စားမူနဲ့ လည်ပတ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို အခွင့်ကောင်း
ယူပြီး မြန်မာပြည်တွင်းကိုပြည်ပကလူမျိုးခြားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်နေရာယူ
နေပါတယ် (ရာဇ၀င်ထဲက မန္တလေးမြို့ ကြီး ရာဇ၀င်ထဲမှာကျန်ခဲ့ပါပြီ)။ မြန်မာလူမျိုး
နှစ်သန်းကျော်ဟာ (မိမိတို့ အဘိုးအဘေးတွေထက်ထက်က နိုင်ချင်တိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့) ထိုင်း
နိုင်ငံမှာမျက်နှာငယ်နဲ့ ကျွန်ခံနေကြရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ မြန်မာပညာတတ်လူငယ်လူရွယ်
သိန်းပေါင်းများစွာဟာ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား ယူအေအီး စတဲ့တိုင်းပြည်
တွေမှာ ကျွန်ခံနေကြရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့
မြန်မာ့အမွေအနှစ် မြန်မာအမျိုးသားပိုင် အမိဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ ကြိုးမိန့် ပေးခံထား
ရပြီး မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မတွေးဝံ့စရာအခြေအနေမျိုးနဲ့ လည်း
ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ နာဂစ်နဲ့ ဂီရိလို စုနမီနဲ့ မုန်တိုင်းကြီးတွေကြောင့် မြန်မာလူမျိုး
တွေ သိန်းချီသေခဲ့ပြီး အခုထက်ထိနလန်မထူသေးပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေအတွင်း
မှာ ဘယ်တုံးကနဲ့ မှမတူတဲ့ သွေးကွဲမူ နာကျည်းမူတွေနဲ့ တဘက်နဲ့ တဘက် စစ်ပွဲ
တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ အခုလို မြန်မာ့သမိုင်းမှာဘယ်တုံးကမှ မကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့
အဖြစ်ဆိုးတွေ ကိုခံစားနေရတဲ့ အခုအချိန်ကို National Crisis ဖြစ်နေတယ်လို့ 
မုချပြောလို့ ရခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာတမျိုးသားလုံး အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့'နိုင်ငံတော်'
ကိုအဖက်ဖက်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အလျှင်အမြန်လိုအပ်နေခဲ့ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် သောမတ်စ်ဟောဗ်စ် (Thomas Hobbes) က
အစိုးရရဲ့ပျက်ကွက်မူကြောင့် ပြည်သူတဦးချင်းစီမှာ ကျရောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကို
'အထီးကျန်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အသိုက်အမြုံပျက်ခြင်း၊ လူအဆင့်မှယုတ်
လျော့ရခြင်း၊ အသက်တိုရခြင်း' တို့ ဖြစ်ရသည်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်
အဆက်ဆက်က အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေအားလုံး သဘောတူတဲ့အချက်
ကတော့ 'အစိုးရရဲ့တာဝန်' ဆိုတာ သူ့ တိုင်းပြည်ထဲက ပြည်သူကိုအဖက်ဖက်မှ
အကာအကွယ်ပေးဖို့ ပါပဲ။ သည်လိုကာကွယ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်လျှင်ခွန်အား
သုံးရမယ်လို့ လည်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကြီးများကျရောက်
မူ၊ တဘက်နှင့်တဘက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မူ၊ သဘာဝဘေးရန်များ
ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးမူ၊ မိမိတို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင် ယဉ်ကျေးမူအမွေအနှစ်
များကိုထိမ်းသိမ်းမူ၊ ပြည်သူ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူ၊ အသိ
ပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များကို တိုင်းပြည်ပြင်ပသို ယိုဖိတ်မူမရှိစေရန်
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူ၊ နိုင်ငံတော်၏ သယံဇာတများလေလွင့်ဆုံးရှုံးမူမရှိ
စေရန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူ၊ သဘာ၀၀န်းကျင်မပျက်စီးစေရန် ကာကွယ်
စောင့်ရှောက်မူ၊ တိုင်းတပါးရန်မှကာကွယ်မူ - အစရှိသည်တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်ကနေ ကနေ့ အထိ မြန်မာတမျိုးသားလုံး
ရရှိခဲ့တဲ့ အစိုရအဆက်ဆက်ဟာ အထက်ကအချက်တွေနဲ့ ဖီလာဆန့် ကျင်
ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်သူအစုအဝေး များသာဖြစ်နေခဲ့ပြီး - နိုင်ငံတော်
ဆိုတာကိုခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကိုဆန်ကျင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အမျိုးသား
သေစ္စာဖေါက် နိုင်ငံခြားလက်ဝေခံ (အ၀တ်အစားအမျိုးမျိုးပြောင်းဝတ်နေတဲ့)
ကိုယ်ကျိုးရှာ အသံကောင်းလွှင့် ဖက်ခွက်စား နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်နေတာ
ကိုသာတွေ့ ရမှာပါ။ သည်တော့ ကနေ့ မြန်မာပြည်က အစိုးရဆိုတဲ့ 'စနစ်
တကျဖွဲ့ စည်းထားသောလူစုလူဝေး' (Organized Mob) ဟာဘယ်လိုအတန်း
အစားမှာရှိသလဲဆိုတာ အပျက်မြင်ဖြင့် ပြောခြင်းမဖြစ်ရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း (၂၄၀၀) ကျော်က ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင် အရစ္စတိုတယ်လ်ရဲ့
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျာခဲ့မူ့ နဲ့ယှဉ်ထိုးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ အထက်ပါ စံနစ် (၆) မျိုးတွင် ဒီမိုကရေစီ ဟာအများအုပ်ချုပ်သော
နည်းစံနစ်ဖြစ်သော်လည်း လူနည်းစုကောင်းစားရေးလို့ ဖေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ ရ
ပါလိမ့်မယ်။ အရစ္စတိုတယ်လ်၏ အတွေ့ အကြုံအယူအဆတွင် လူထုအကြိုက်
သွေးထိုးမြှောက်ပင့်တတ်သူများ (Demagouges) မှ ယင်းတို့ အား အများစုလ္ခံမူ
ရရှိစေရန်စွမ်းဆောင်ကာ ပြည်သူအများစုကို သွေးဆောင်းဖျားယောင်ပြီးနောက်
အာဏာလက်ဝယ်ရရှိချိန်တွင် ယင်းတို့ .လူနည်းစု (အနည်းစု) ကောင်းစားရေးကို
သာလုပ်လေ့ရှိကြတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အရစ္စတိုတယ်က သူ့ ခေတ်က
ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို လူနည်းစုကောင်းစားရေးစံနစ်လို့ ဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(သည်အခြေအနေဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ အတုအယောင် ရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီတွေ
အဖြစ်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ နိုင၈်ပါတယ်။ ပြည်သူကို မဲခိုးမဲလိမ်ပြီး အင်အား
သုံးပြီး အာဏာကိုအရယူခဲ့တဲ့ သန်းရွှေ မောင်အေး သိန်းစိန်တို့ ရဲ့ မြန်မာပြည်က
အာဏာရှင်တွေပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၄၀၀ က အရစ္စတိုတယ်လ်
ရဲ့ စိုးရိမ်သုံးသပ်မူဟာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ)။
သည်လိုပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀) ရာစုအတွင်းက တရုတ်သမတ ချန်ကေရှိတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်
သမတ ဖာဒီနန်မားကိုစ့် တို့ ဟာ အများသဘောကျ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲံခဲ့ရတဲ့ သမတများဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အာဏာရရှိပြီးနောက်
မိမိဆွေမျိုး မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာလူနည်းစု ကောင်းစားရေးကိုသာလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်
မိမိအ၀န်းအ၀ိုင်းရဲ့ အာဏာနဲ့ အကျိုးစီးပွါးကိုသာကာကွယ်ရင်း ရာဇာပလ္လင်ပေါ်က
ဆင်းမပေးတော့ပဲ တသွေးတသံတမိန့် နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေဖြစ်သွား
ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တိုင်းပြည်
အားလုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်များအရ - အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကို အမျိုးအစား
သုံးခုအတွင်းမှာပဲ ထည့်သွင်းနှိုင်းယှဉ်ထားတာကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရှိရ
အထက်ပါအစိုးရသုံးမျိုးစလုံးတွင် အမိန့် အာဏာဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ
နှစ်မျိုးဖြစ်သော အာဏာရှင်အစိုးရ (Authoritarian Government ) နှင့်
တပါတီဗဟိုဦးစီးစံနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သော (Totalitarian Government) စံနစ်
နှစ်မျိုး ၏မတူခြားနားမူမှာ တပါတီဗဟို ဦးစီးစံနစ်၌ တိကျသောအယူဝါဒနှင့်
လမ်းစဉ် 'မူ' ကိုကိုင်စွဲပြီး၊ အာဏာရှင်စံနစ်မှာတော့ မည်သည့်မူ မျှမရှိပဲ မူအစား
အခြေအမြစ်မခိုင်သော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် စိတ်ထင်ရာကိုဥပဒေပြုပြီး
တိုင်းပြည်ကို အမိန့် အာဏာ သေနတ်တို့ ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တပါတီဗဟိုဦးစီးစံနစ်မှာ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးကို စီမံကိန်းဖြင့်အကောင်အထည်
ဖေါ်လေ့ရှိပြီး အာဏာရှင်စံနစ်မှာတော့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအားလုံးကို
အာဏာရ အာဏာရှင်အုပ်စုနှင့် သူတို့ ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာတွေကို အခွင့်
အရေးပေး လုပ်ကိုင်တဲ့ စီးပွါးရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ အာဏာရှင်တို့ ၏
မြန်မာ့ဦးပိုင်လိမိတက်၊ နှင့် ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာ၏သား စတီဗင်လော၏ အေးရှား
ဝေါဒ်။ သန်းရွှေ့သားမက် တေဇ အစရှိသည်ဖြင့်)။
သို့ သော် တပါတီဗဟိုဦးစီးစံနစ်၌ စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်း
များ ကာလကြာမြင့်စွာ အောင်မြင်မူမရှိခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း တည်ဆဲ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး စီးပွါးရေးနှင့် မူလ ၀ါဒတို့ မကိုက်ညီတော့သည့်အခါတွင်၎င်း
ပြည်တွင်းရှိပြည်သူမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာသည်အခြေအနေတို့ တွင်သော်၎င်း
တပါတီစံနစ်ဟာ ရုတ်တရက် ပြိုကျသွားတတ်တာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
၁၉၈၈ မှာ မ.ဆ.လ တပါတီပြိုကွဲသွားရခြင်းနဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်များ
အတွင်းဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ အရှေ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ ဖြစ်စဉ်များကသက်သေပြနေ
စစ်အာဏာရှင်သို့ မဟုတ် အရပ်သားအာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ထုးခြားတဲ့ ၀ိသေသ
လက္ခဏာကတော့ အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ 'မူ' မရှိခြင်းပါပဲ။ သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ
ပေါ်လာတဲ့ သူ့ တို့ အတွက် ကောင်းမယ်ထင်တာ သူတို့ အတွက်အကျိုးရှိမယ်
ထင်တာအားလုံးကို ပရမ်းပတာနဲ့ အကွပ်အညှပ်မရှိ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တဲ့ ၀ိသေသ
လက္ခဏာပါပဲ။ နောက်ထပ် ထူးခြားမူတခုကတော့ တပါတီဗဟိုဦးစီးစံနစ်မှာ
သေနတ်ကိုစားပွဲအောက်မှာဝှက်ထားပြီးတော့ ၀ါဒလမ်းစဉ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ပေမဲ့
စစ်အာဏာရှင်တွေကတော့ သေနတ်ကို ခါးကြားမှာဗြောင်ထိုးပြီး အုပ်ချုပ်
တော့တာပါပဲ။ ငါပြောသလိုမလုပ်ရင် ငါ့ဘက်ကအဆင်သင့် ငါကတော့ပစ်မှာပဲ
ဆိုတဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာပါပဲ။ အကယ်၍သာ အာဏာရှင်စံနစ်မှာ 'မူ' ရှိတယ်
ဆိုလျှင်လည်း အဲသည်မူဟာ 'ထင်ရာလုပ်မူ' သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထက်က
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အစိုးရသုံးမျိုး၏ ကွာခြားမူများကို နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ က
အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း အသေးစိတ်ထပ်မံဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ် -
အထက်ဖေါ်ပြပါဖွင့်ဆိုချက်များအရ အာဏာရှင်စံနစ်သည် တပါတီဗဟိုဦးစီး
စံနစ်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုဆိုးရွားနေတာကိုတွေ့ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
မ.ဆ.လ တပါတီအာဏာရှင်စံနစ်က န.၀.တ န.အ.ဖ နာဂစ်အစိုးရ တို့ ထက်
စာလျှင် ပိုသက်သာဦးမလားလို့ တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ အမှန်တော့ နေ၀င်းရဲ့
မ.ဆ.လ တပါတီ စံနစ်ဟာ အခြားဆိုရှယ်လစ်တိုင်းပြည်တွေလို တိကျတဲ့ လမ်စဉ်
နဲ့ မူဝါဒမရှိခဲ့ပဲ (အမှန်တော့) မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး စစ်အာဏာရှင်
စံနစ်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တာ ကနေ့ ဆိုလျှင်ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါးရှိခဲ့ပြီလို့ 
နိုင်ငံရေးသွေးခုံနှုန်းတိုင်းတာမူအရဆိုလျှင် မ.ဆ.လ အစိုးရဟာ တစတစကျုံလှီ
ပြီးသေဆုံးစေတဲ့ ခုခံကျရောဂါ 'ကမ္ဘာနာ' (AIDS/HIV) နဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူပြီး
န.၀.တ န.အ.ဖ နဲ့ သန်းရွှေ သိန်းစိန်တို့ ရဲ့ နာဂစ်အစိုးရတွေဟာ Leukemia
သွေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူပါတယ်။ ပိုပြီးသေချာတဲ့အချက်ကတော့
ယနေ့ မြန်မာပြည်ဟာ သည်ရောဂါဆိုးနှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်နက်ခံစားနေရတဲ့
လှိုင်ဘွား / ၈၈
Guy, J James., People, Politics and Government
Scarborough: Prentice Hall Canada Inc., 1995
Macridis, C. Roy., Contemporary Political Ideologies:
Scott, Foresman & Company., 1989
Saunders, J. Trevor., Aristotle: The Politics
London: Clays Lt., 1992
Winter, R. Thomas., People and Politics
John Wiley and Sons Inc., 1981
Philip E. Tetlock: Counterfactual Thought Experiments in World Politics
Princeton University Press., 1996
Hedley Bull: The Anarchical Society - A Study of Order in World Politics (2nd edition)
Mac. Millan Press Ltc, London 1977
You can buy the tickets for THE LADY next week in...
KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်အားဗိုလ်မှူးအ...